လှတျအောငျပွေးနရေတဲ့လူငယျတှကေို ကားနဲ့ချေါတငျသှားဖို့မတ်ေတာရပျခံလာတဲ့ ပွညျသူတခြို့ – Cele Lover
လှတျအောငျပွေးနရေတဲ့လူငယျတှကေို ကားနဲ့ချေါတငျသှားဖို့မတ်ေတာရပျခံလာတဲ့ ပွညျသူတခြို့
YBS ကားခဖိုးတောငျမရှိဘဲ မိမိခွထေောကျကိုသာအားကိုးပွီး လှတျအောငျပွေးနရေတဲ့လူငယျတှကေို ကားနဲ့ချေါတငျသှားဖို့မတ်ေတာရပျခံလာတဲ့ ပွညျသူတခြို့
လူထုလှုပျရှားမှုတှမှောဆိုရငျ ရှဆေုံ့းကနပေါဝငျနကွေတဲ့ လူငယျတှထေဲမှာ ပွညျ့စုံတဲ့သူတှလေညျးပါဝငျသလိုခြို့တဲ့သူတှလေညျးရှိပါတယျ။တခြို့လူငယျလေးတှဆေိုရငျ မိသားစုရဲ့စားဝတျနရေေးအတှကျ ရုနျးကနျနရေပမေယျ့ လူထုလှုပျရှားမှုတှမှောတော့ နတေို့ငျးလိုလို ပါဝငျအားဖွညျ့ပေးကွတာဖွဈပါတယျ။
လူငယျတှရေဲ့ ရဲစှမျးသတ်တိနဲ့အရာရာကိုစှနျ့လှတျစှနျ့စားရဲတဲ့ စိတျဓာတျတှကေိုလညျး ပွညျသူလူထုက အရမျးလေးစားပွီးခြီးကြူးနကွေတာဖွဈပါတယျ။
လတျတလောမှာဆိုရငျလညျး လူထုလှုပျရှားမှုတှမှော လူငယျတှရေဲ့ အားမာနျအပွညျ့နဲ့ခြီတကျနကွေတဲ့ ပုံရိပျတှကေိုလူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တှမွေ့ငျနရေတာဖွဈပါတယျ။တခြို့လူငယျလေးတှဆေိုရငျ သပိတျတညျရှိရာမှာပူပေါငျးဖို့အတှကျ အဝေးကွီးကနလောရပွီး
YBS အသှားအပွနျကားခဖိုးတောငျမရှိကွတာဖွဈပါတယျ။သပိတျလူစုခှဲတဲ့အခါလညျး လူငယျလေးတှကေ နပေူပူ၊မိုးရှာရှာ ဂရုမစိုကျအားဘဲ မိမိခွထေောကျကိုသာအားကိုးပွီး လှတျအောငျပွေးကွရတာဖွဈပါတယျ။
Taxiမောငျးတဲ့သူတှနေဲ့ ကားပိုငျရှငျပွညျသူတှကေ ပွေးလှားနရေတဲ့လူငယျလေးတှကေိုတှတေဲ့အခါ မိမိကားပျေါချေါတငျပွီး ကူညီပေးကွတာဖွဈပါတယျ။လူငယျတှကေတော့ သူတို့ရဲ့အကြိုးအတှကျ ဆောငျရှကျနကွေတာမဟုတျဘဲ ပွညျသူတှအေကုနျလုံး
လကျရှိအခွအေနကေလှတျမွောကျဖို့အတှကျ အနာခံပွီးကွိုးစားနကွေတာဖွဈပါတယျ။ဒါ့ကွောငျ့လညျး အိမျပွနျဖို့ခကျခဲနတေဲ့ လူငယျလေးတှကေိုတှတေဲ့အခါ တတျနိုငျသလောကျကူညီကွပါဦးလို့ တိုကျတှနျးနှိုးဆျောလိုကျပါတယျ။.
YBS ကားခဖိုးတောင်မရှိဘဲ မိမိခြေထောက်ကိုသာအားကိုးပြီး လွတ်အောင်ပြေးနေရတဲ့လူငယ်တွေကို ကားနဲ့ခေါ်တင်သွားဖို့မေတ္တာရပ်ခံလာတဲ့ ပြည်သူတချို့
လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာဆိုရင် ရှေ့ဆုံးကနေပါဝင်နေကြတဲ့ လူငယ်တွေထဲမှာ ပြည့်စုံတဲ့သူတွေလည်းပါဝင်သလိုချို့တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။တချို့လူငယ်လေးတွေဆိုရင် မိသားစုရဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက် ရုန်းကန်နေရပေမယ့် လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာတော့ နေ့တိုင်းလိုလို ပါဝင်အားဖြည့်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။
လူငယ်တွေရဲ့ ရဲစွမ်းသတ္တိနဲ့အရာရာကိုစွန့်လွှတ်စွန့်စားရဲတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေကိုလည်း ပြည်သူလူထုက အရမ်းလေးစားပြီးချီးကျူးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
လတ်တလောမှာဆိုရင်လည်း လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ လူငယ်တွေရဲ့ အားမာန်အပြည့်နဲ့ချီတက်နေကြတဲ့ ပုံရိပ်တွေကိုလူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တွေ့မြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့လူငယ်လေးတွေဆိုရင် သပိတ်တည်ရှိရာမှာပူပေါင်းဖို့အတွက် အဝေးကြီးကနေလာရပြီး
YBS အသွားအပြန်ကားခဖိုးတောင်မရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။သပိတ်လူစုခွဲတဲ့အခါလည်း လူငယ်လေးတွေက နေပူပူ၊မိုးရွာရွာ ဂရုမစိုက်အားဘဲ မိမိခြေထောက်ကိုသာအားကိုးပြီး လွတ်အောင်ပြေးကြရတာဖြစ်ပါတယ်။
Taxiမောင်းတဲ့သူတွေနဲ့ ကားပိုင်ရှင်ပြည်သူတွေက ပြေးလွှားနေရတဲ့လူငယ်လေးတွေကိုတွေ့တဲ့အခါ မိမိကားပေါ်ခေါ်တင်ပြီး ကူညီပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်တွေကတော့ သူတို့ရဲ့အကျိုးအတွက် ဆောင်ရွက်နေကြတာမဟုတ်ဘဲ ပြည်သူတွေအကုန်လုံး
လက်ရှိအခြေအနေကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက် အနာခံပြီးကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ကြောင့်လည်း အိမ်ပြန်ဖို့ခက်ခဲနေတဲ့ လူငယ်လေးတွေကိုတွေ့တဲ့အခါ တတ်နိုင်သလောက်ကူညီကြပါဦးလို့ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။.
Previous Article မနကေ့ ကားနားလာပွီး ကလေးငယျငယျတဈယောကျ “ငုံးဥပွုတျဝယျပါဦး” လာရောငျး လို့ ဝယျလိုကျမိသောအခါ
Next Article စီးပှားရေးအခွနေမေကောငျးလို့ ဒူးရငျးသီးတှေ ရောငျးနတေဲ့ နန်ဒာလှိုငျ